42 dhimasho kadib Apple ayaa ka saaraysa barnaamijyada "uumiga" App Store | Wararka IPhone
Apple-ka waxay ku heleen inay la shaqeeyaan dhammaan codsiyada ay ku hayaan App Store oo si toos ah ula xiriira "vaping". Haa, kuwa sigaarka elektaroonigga ah ee bixiya buug-yare ballaaran oo loo maleynayo inay yihiin aromas dabiici ah iyo maanta gudaha Mareykanka kaliya waxay horey u geysteen 42 dhimasho sida ku xusan CDC (Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada).
Waxaa loo maleynayaa in marka laga soo tago dhimashadan waxaa jira 2.172 xaaladood oo cudurro daran oo xagga neef-mareenka ah la xiriirta dadka sameeya dhaqankan cusub ee tuubista iyo kuwa ku isticmaalay nikotiin ama xashiishad aaladooda. Way cadahay in Apple aysan dooneynin inay ku wasakhoobaan tan tan iyo maantana ay tirtireen in ka badan 180 barnaamij oo la xiriira dhaqankan.
Qaar ka mid ah barnaamijyadan ayaa loo bartay xakamee nalalka LED-ka in qalabkani ku daro, kuwa kale si loo xakameeyo heerkulka ama xitaa loo xakameeyo la soco wararka iyo wararka ku saabsan adduunkan in yar oo yar ayaa adduunka oo dhan looga aasaasayaa cawaaqibka halista ah ee ay keenaan. Bilowgii isticmaalka sigaarkan elektaroonigga ah waxaa la sheegay inaysan waxyeello u lahayn caafimaadka, muddo ka dib iyo daraasado cilmiyaysan oo ay ku lug leeyihiin, waxaa la ogaaday inay kuwani yihiin sababta dhimashada dhowr qof marka lagu daro inay sababaan cudurro muhiim u ah neef-mareenka. .
Tani waa bayaanka rasmiga ah ee shirkadda Apple Ku saabsan ka saarista barnaamijyada dukaanka iOS:
Waxaan aad uga taxadareynaa abuurista App Store oo ah meel lagu kalsoonaan karo dhammaan macaamiisha, iyo gaar ahaan dhalinyarada, si loo soo dajiyo codsiyada. Waxaan si joogto ah u qiimeynaa barnaamijyada waxaanna tixraacnaa imtixaannadii ugu dambeeyay si loo go'aamiyo halista caafimaadka dadka iyo caafimaadka. Dhawaan, khubarada ka kala socota CDC ilaa American Heart Association waxay u aaneeyeen dhaawacyo kala duwan oo sambabada ah iyo geerida sigaarka elektaroonigga ah iyo soosaarida qiiqa, xitaa iyagoo ugu yeeraya faafitaanka aaladahaan dhibaato caafimaad oo bulsho iyo aafo. Waan ku raacsanahay daraasadahan waxaanan cusbooneysiinay tilmaamaheena dib u eegista dukaanka si aan u muujino in barnaamijyada dhiiri galinaya ama fududeynaya isticmaalka alaabtan aan la ogoleyn Laga bilaabo maanta, barnaamijyadan mar dambe lama heli karo si loo soo dejiyo.
Shaki kuma jiro in Apple ay xiiseyneyso caafimaadka dadka isticmaala, in kasta oo ay run tahay in xorriyadda sigaar cabista iyo in kale ay tahay arrin shaqsiyadeed oo qof walba ay tahay inuu qiimeeyo. Xaaladdan oo kale, waxa Apple sameeyo ayaa xadidaya isticmaalka barnaamijyada tixraacaya dhaqankan, kama mamnuucayo isticmaalaha inuu isticmaalo nooca sigaarka elektarooniga ah ama kuwa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » 42 dhimasho ka dib Apple ayaa barnaamijyada "vaping" ka saaraysa App Store
Dabeylaha duufaanku waxay ku hareeraysan yihiin Fortnite dhowr maalmood